Ụbọchị My Pet » 6 Key Ajụjụ ịjụ onwe gị, Tupu e mikpuru dịwara Pool
6 Key Ajụjụ ịjụ onwe gị, Tupu e mikpuru dịwara Pool
Kere aga nri ụlọ ahịa n'ihi na a na-eme ịzụ ahịa njem. Ị na-eleghara ka ha na ndepụta nke ihe ndị dị gị mkpa, a mmefu ego, ma ọ bụ ọbụna nri echiche.
The n'usoro nke nhọrọ na-uche boggling. Ị na-amaghị ebe anya mbụ. Unu enweghị usoro ... .Ka usoro iji gị ara.
Obi sie ike na i ga imefusị oge, echefu ịtụtụrụ ụfọdụ mkpa nke ukwuu "ngwaahịa" ihe, overspend, na ejedebe na-eme ka a abụọ njem tupu ọnwa dị n'ofe.
A yiri echiche nke ọgba aghara na mgbagwoju anya na-ahụkarị omume mgbe anyị na-na na na "ahịa" n'ihi na a mate.
Ọtụtụ n'ime anyị na-enweghị ezigbo echiche nke ihe anyị na-achọ, ebe anya, ma ọ bụ otú na-abata na-eme asian nhọrọ.
Ma, na o nweghị ka ọ dị otú.
Dị ka Socrates otu ugboro-eji amamihe kwuru, sị: "The unexamined ndụ bụ bụghị uru ndụ."
Na nke a dị ka anyị guideline, ebe a na- 6 oké mkpa ajụjụ ndị ị kwesịrị ịjụ onwe gị tupu ha amalite na ihe niile na-mbụ dị mkpa ụbọchị.
1. Gịnị bụ m ugbu a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị mgbaru ọsọ? M na-achọ a ga-eme n'ọdịnihu ma ọ bụ nwunye? Ukporo mkpakọrịta nwoke na nwaanyị? Onye na-emeghe mmekọrịta? A sugar Papa? The ghọtakwuo na ị bụ, mma ị ga-enwe ike na-ekwurịta okwu nke a na-a nwere onye, na fairer ọ ga-abụ ha. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-adịghị ikpoputa ha ya, ọ pụrụ inye aka ịzọpụta oge na ọgba aghara na mbụ echetakwa usoro. Chee echiche atụmatụ!
2. Olee ihe ndị m ndibiat Oké mmali? Yabụ, Olee àgwà, àgwà, ma ọ bụ ndụ okwu ndị ị na-adịghị njikere imebi. Dị ka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị ikom agaghị ụbọchị inyom na ụmụaka. Ụfọdụ ndị inyom agaghị ụbọchị okorobịa a mpụ ndekọ. Na ndị ọzọ, afọ nwere ike ịbụ ihe na-akpata na mkpokọta akụkụ. Ọ bụ ezie na ikwere bụ ihe dị mkpa ka ihe niile gaa nke ọma mmekọrịta, anyị ekwesịghị imebi anyị isi ụkpụrụ ma ọ bụ ọdịdị zuru oke nke ndị anyị bụ, dị nnọọ ka a ga-tinyere na a cutie.
3. Gịnị ka m na-amụta site ikpeazụ m mmekọrịta? E nwere bụ oké eziokwu na okwu, "Ndị na-na-na-amụta site n'oge gara aga na a kara aka na-ekpeghachi ya." Ikekwe na ịsị gị ugbu a na-aghọta na "Nelly" abụghị gị ihe. Ma ọ bụ na ị chọrọ ka okwu gị mkpa mma. Ihe Mmụta dị iche n'ihi na onye ọ bụla na ịhụnanya "na-amụrụ ihe." Ezigbo ebumnobi bụ ịchọpụta ihe ọ bụla na-ebibi ma ọ bụ disserving mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ihe nakawa etu esi zere ugboro ugboro. Inwe echiche ebe a?
4. M bụ search achịkwa ezi uche na-atụ anya? Inwe a na-asa ákwà na ndepụta nke dị elu mmasị ga na-emebi atụmatụ na ogologo usoro. Ọmụmaatụ, ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwewa chọta a nwunye onye bụ isii ụkwụ ogologo, na-eme ka ọnụ ọgụgụ isii, onye ka mgbe a lụrụ di na nwunye, na-ekwu okwu 3 asụsụ, na hụrụ anu ulo. Ọ ga-ekwe omume? Chọpụta.
Ikekwe? Ihe ka m ịlụ m celebrity anwụrụ, Keanu Reeves. Get a aidia.
5. Nke a bụ oge kacha mma ka m ụkwụ mmiri? M na-achọ a rebound dochie a bụbu mmekọrịta? M na-enwe oge na ume-eji ịbụ ihe hà onye na a mmekọrịta? M gwọọ site n'oge gara aga ọnyá? Ndị a bụ ihe ndị dị mkpa na-atụle. Na naanị gị maara n'ezie na ndibiat.
6. Gịnị bụ egwuregwu m atụmatụ? M ga edebanye maka online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ? Jụọ enyi m idozi m? M wodrobu "ụbọchị njikere?"Unu dị m mkpa ifelata? M ga na-akpa ugboro abụọ n'izu ma ọ bụ ugboro abụọ n'ọnwa? Dị ka ihe niile dị oké njọ mgbaru ọsọ, a egwuregwu atụmatụ kwesịrị ịbụ ebe na-eje ozi dị ka a compass, na-anyị kwara, ma na-edebe anyị na N'ezie.
"Iji gi onwe-abụ eziokwu." Ọ bụrụ na ị ga-amasị dịkwuo emegide nke ịchọta nri ma ọ bụ nwunye na-eke ihe dakọtara mmekọrịta, ga-esi mara onwe gị mbụ.
12 Ga Haves N'ihi anabata Enyemaka. Right
Nwere ike Ọma Women n'ezie ọ All?